Çekmeköy Sultanbeyli Metrosu Yapımı Yeniden Başladı – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDhismaha mitrooga Çekmeköy Sultanbeyli Ayaa Mar Kale Bilaabmay
26 / 11 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
Waxsoosaarkii mamoğlu wuxuu Dib u Bilaabay Khadkii Wadada Duran Mudo Sanado Ah
Dhismaha wadada Çekmeköy Sultanbeyli Subway ayaa mar labaad bilaabatay; Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu dib u bilaabay Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Line, oo loo dhisay 2 sano. Emamoğu wuxuu carabka ku adkeeyay in adeeg kasta oo magaalada ka mid ah ay iska leedahay shacabka wuxuuna yiri: “Awooda iyo awooda Istanbul way kala duwantahay. Adduunku wuu joogsanayaa, Istanbul ma aha. Istanbul waa xarunta adduunka. Tani maanta maahan; kumanaan sano kahor, maanta iyo maanta waa sidaas. Waa inaan u dhaqmeynaa sida ugu habboon oo aan isu taageerno si ku habboon. Marka waa inaan wadada dhan u dhaqaaqnaa. Quluubta dadkeenna 16 milyan ee qof waa inay weeraraan Istanbul. ”
Shaqooyinka dhismaha ee Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Line, oo loo joojiyay 2 sanado iyo kaliya 6 ee wax soo saarkiisa jir ahaanta ilaa maanta, ayaa dib loo bilaabay. Mashiinka loo yaqaan 'TBM (Tunnel Boring Machine)', oo loo yaqaan "maktabadda hoostiisa dhulka hoostiisa mara, ayaa hoos loogu dhigay goobta dhismaha Sancaktepe Station iyadoo xaflad ay ka soo qeybgaleen Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu. Munaasabadda, CHP Istanbul kuxigeenka Gökhan Zeybek iyo Duqa Sancaktepe Şeyma Döğücü ayaa sidoo kale ka soo qeybgalay. Munaasabadda ka hor, sedexdii waxay sameeyeen kormeer goobta dhismaha. Imamoglu, khudbadiisi ka jeedisay xaflada ayaa u mahadceliyay cid walba oo gacan ka geysatay dhismaha khadka.
“ISTANBUL MA AHA WAA ISSUE KALIYA”
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in gaadiidka dadweynaha uu yahay mid ka mid ah maaddooyinka ugu muhiimsan ee Istanbul, ayuu yiri İmamoğlu, “Magaaladeenu waxay leedahay maadooyin badan. Waxaan jeclaan lahaa inaan gaarno qeexitaanka 'ugu muhiimsan' ee hal qodob. Laakiin sidaas oo kale ma aha. Waxaa jira qodob kale oo taagan meel kale, oo aan dhammaanteen wax ka qaban karno, sida dhulgariirrada, oo aan dhammaanteen u tixgelinno arrimo muhiim ah. Ama bulsho ahaan, waa inaanan waligeen iloobin, arrimaha ugu muhiimsan dalkeenna iyo magaaladeenna, arrimaha qaxootiga, waxaa jira arrinta qaxootiga. 'Waxaa jira hal arin oo muhiim ah, kaliya ha dhihin diiradda saar'. Emamoğlu wuxuu carrabka ku adkeeyay inay soo saaraan xalal kaladuwan xagga gaadiidka dadweynaha wuxuuna yiri, “Metro waa ganacsigayaga koowaad. Arrinta ku saabsan kor u qaadista metro illaa heerka ugu sarreeya ee magaalada Istanbul waa arrin qaran. Waxaan u baahanahay inaan keeno magaalada boqolaal kilomitir oo mitir ah magaaladan. Maalintii ugu horreysay ee laga bilaabo, Mr. Sözen, waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo duqa magaalo kasta oo gacan ka geysaneysa shaqsi ahaan. Waxaan leenahay sheegasho: 'Inbadan in la sameeyo'. Sheegashada soo socota ka dib waa inaan awoodno inaan waxbadan qabano. Waxaan ku nidhi, Waxyaabahayagu waxay noqon doonaan kuwo aad u qurux badan 'manaanaan idhi oldu Wax walba way qurux badnaayeen'. Falsafada waa mid aad u cad: Markaad subax kasta tooso, dheh, 'Wax walbana way fiicnaan doonaan'. Waa kuwee, u qaad tallaabo hore u qaadidda sida ugu wanaagsan. 'Markaad tiraahdo wax walba aad ayey u fiicnaayeen, noloshu way dhammaatay, ayuu yidhi.
"HALKAAN, MAALINTA adeegga"
Imamoglu wuxuu sheegay in markii ay xafiiska la wareegeen in wadarta xariiqda metro ee 8 la joojiyay isla markaana ay dib u bilaabeen xariiq labaad ka dib khadka 'ranmraniye-Göztepe Metro Line. Imamoglu wuxuu yidhi, "Maanta, waxaan samaynaynaa bilow kale. Khadkani waa xariiq muhiim ah. Waxaan ku xusay muhiimada xariiqdaan khudbadaha ay ka jeedin doonaan gobolka. Ma jiraan maalmo dheeraad ah, maalmaha adeegga. Asxaabtayda waxay soo bandhigeen daraasad deg deg ah oo ku saabsan arinta maalgelinta laxiriirta hirgalinta xariggan. 2 waxay ku bilaabatay howsha iyadoo ay kaqeyb galayaan shirkadaheena geesiyaasha ah ee iyagu ah soosaarayaasha xaruntan oo ay weheliso ilaha dhaqaale ee la xiriira abaabulka goobtan dhismaha oo sanado badan taagneyd. Waxaan rajeynayaa in howshan ay si dhakhso ah ku dhamaan doonto. Dhaqaaluhu ma lahan geedi socod sahlan dalkeena iyo aduunkaba. Maalgalinta ayaa hadda aad uga sii xumaatay tii 2 sano ka hor. Sidoo kale waa muhiim in Deutsche Bank, Jarmalka, ay aaminto oo ay gacan ka geysato howshan. Waad ku mahadsantahay wada shaqeynta leri.
“Awoodda iyo awoodda ISTANBUL WAA KALE”
Awooda iyo kartida Iiraan waa mid kala duwan, ayuu yiri ismamoğlu, “Dunida way joogsataa Istanbul ma ahan. Istanbul waa xarunta adduunka. Tani maanta maahan; kumanaan sano kahor, maanta iyo maanta waa sidaas. Waa inaan u dhaqmeynaa sida ugu habboon oo aan isu taageerno si ku habboon.
Marka waa inaan wadada dhan u dhaqaaqnaa. Wadnaheenna 16 milyan ee qof waa inay ku garaacaan Istanbul. Waxaan ubaahanahay inaan gaarno go'aannada saxda ah. Waxaan u baahanahay inaan iskaashi la sameyno go'aannada saxda ah. Shaqadan; dowladda dhexe, dowladda hoose ee Istanbul, degmada degmadu ma lahan wax sidan oo kale ah. Midkoodna tani kuma jirto jidka. Qof walbaa wuxuu ubaahanyahay inuu kudhaqmo qof gacan ka geysanaya howsha noocaas ah horana usameeya inuu noqdo cudud gacan. Waxaan diyaar u nahay taas. Ku alla kii gacantiisa jiida, waan ku adkaan doonaa inaan gacantiisa ku qabsanno. Si kale haddii loo dhigo, waxaan nafteenna u aragnaa inay yihiin hay'adda ugu dhiirranaanta xagga iskaashiga. Ayadoon loo eegayn qofka, hay'adda iyo awoodda siyaasadeed ee aan eeganeyno. Marka tan la eego, tani waxay u dhigantaa dulqaad, dulqaad, dareen midnimo iyo kasbashada ganacsiga. Halkaa marka la joogo, saxiixyada waa la sameeyay waxaanan maanta u dabaaldegaynaa iskaashiga ay la sameynayaan IMM, qandaraasleyaasha, Ankara iyo hay'adaha maaliyadeed. Qof walba wuu sacbi doonaa, taasi waa fududahay. ”
NATUU WAA SHAHAADADA “
Emamoğlu wuxuu carrabka ku adkeeyay in milkiilaha adeegga uusan ahayn duqa wakhtigaas ama xisbiga siyaasadeed ee awoodda lahaa xilligaas. dawlad, dadweyne, qaran. Si kale haddii loo dhigo, waxaad tahay dhexdhexaadiye ku guuleystey hanaankaas maalintaas. Waxaan ahay wakiilka Maanta waxaan ahay dillaaliye, berrito qof kale. Aynu ammaano guulaha aan gaarno, laakiin waligaa ha iraahda 'Annagaa leh'. Xariiq la'aan. Sidaa darteed, mashruuc kastaa kama tirsana xisbi mana ka tirsan yahay qofka masuulka ka ah. Annagu, shaqsiyaad ahaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan si wanaagsan u maareyno hawshaas, annaguna waan gudnay waajibaadkeenna. Oo waxaan soo qaadan doonaa dadkeenna habkan casriga ah ee gaadiidka. Ma jiro qof afkeenna maqli doona: 'Mashruuca xisbiyadeenna, mashruuceyda, waanan qabtay.' Wax sidaas oo kale ah ma jiraan. Waan qabanay, qaran ahaan waan qabanay. Waxaan dardargelin doonnaa habka dib u cusboonaysiinta baska ee shirkadda 'BRT', kaliya maahan metrooga, laakiin sidoo kale ku guul darreysiga gaadiidkeenna shacabka ee taageeraya mitirka. Gaar ahaan, waxaan soo gaabin doonaa khadadka IETT, ma dheera, waxaan ka dhigi doonnaa inay muujiyaan oo taageeraan khadadka kale ee gaadiidka dadweynaha. Isla mar ahaantaana, waxaan diiradda saari doonnaa gaadiidka badda waxaanan ka yeelnaa qodobbada kale ee gaadiidka dadweynaha wax ku ool ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaan Istanbul uga abuuri doonnaa nidaam si buuxda isugu dhafan. Gaadiidka dadweynaha waa arin kacsan, fursad uma lihid inaad dhahdo, 'Waan xalinay gebi ahaanba'; laakiin waxaan rabnaa inaan haysanno Istanbul taas oo ah mid casri ah intii suurtagal ah, halkaas oo aan bulshada dhib ku qabin, safarada maalinlaha ah ku qaata raaxo, noloshiisa badana ku qaata shaqadiisa, xooggiisa iyo noloshiisa bulshada, oo aan ku jirin gaadiidka dadweynaha. ” Imamoglu, oo la wadaaga macluumaadka farsamada ee khadka, ayaa badhanka ku riixay wefdiga la socda ka dib khudbadiisa oo mashiinka TBM laga soo dejiyay goobta dhismaha xaflad.
64 THOUSAND 800 PASSENGERS WAA LAGU SAMEEYAA HAL DAROOD
Saldhigga 8, oo la rajaynayo inuu fududeeyo isu socodka waddooyinka ee dhinaca Anadrol ee magaalada, ayaa la filayaa inuu yareeyo isu socodka gaadiidka ee labada dhinac. Dhererka dhadhanka, kiiloomitir 10,9, waqtiga safarku wuxuu noqon doonaa 16 daqiiqo. Khad waxaa lagu qaadi doonaa 64 kun oo 800 rakaab ah hal jiho saacaddiiba. saf; Degmooyinka Çekmeköy, Sancaktepe iyo Sultanbeyli way dhaafi doonaan. Markii laynka cusub, oo ah sii wadida wadada 'üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Line, ayaa la adeegsaday, Khadadka Marmaray iyo Metrobus, Diyaaradaha la diyaariyey oo la dhameystiray, Sultanbeyli-Kurtköy Speed ​​Speed ​​Train iyo Yenidoğan-İmes-Sogng-So-Ta-Yen Waxaa lagu dhexgalidoonaa khadka toosan ee Dudullu-Bostancı iyo Metromraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Line.
CIIDAMADA KA HORTAGA XAALADA RASMI AH
Dhismaha '2017 May' wuxuu ka bilaabmay 29 Diseembar 2017'de oo ay joojisay IMM. Dhismaha ayaa dib loo bilaabay bishii Maarso 2018; si kastaba ha noqotee, iyadoo ay ugu wacan tahay lacag-bixintii la waayey, goobta dhismaha ayaa la aamusay Oktoobar 2018. Khadkan, oo dib loo soo saaray iyada oo laga amaahday Deutsche Bank heshiiskii la saxiixay Bishii Nofembar 2019, ayaa la qorsheynayaa in lagu shubo adeeggii ugu dambeeyay ee 2022. In kasta oo marinnada waaweyn ee nidaamka tareenka dhulka hoostiisa ay ka qodeen TBM, xarunta boosteejada 6 waxaa lagu dhisi doonaa hab tuneel NATM ah iyo hoolalka tigidhada oo lagu dhisi doono nidaam fur-furan. Barxada iyo hoolalka tigidhada ee xarunta 2 waxaa lagu gaari doonaa qaab dhammaystiran oo u-furan. Khadkan, oo lagu dhisi doono tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay, ayaa bixin doonta adeegga 'Metro Ful Automatic Driverless Metro'. Goobaha dhererka dhererka ee buuran ee Gawaarida Leyen waxaa loo adeegsan doonaa saldhigyada si looga hortago inay ku dhacaan biraha. Saldhigga Samandıra, wadayaashu waxay dhigan karaan gawaaridooda waxayna ku sii wadi karaan safarkooda metro. Ujeeddadan awgeed, 336 awoodda gawaarida si buuxda otomaatig ahaan loogu adeego ayaa la bixin doonaa.
Dhismaha Isgaadhsiinta-Sancaktepe-Sultanbeyli Dhismaha Mashruuca Dhismaha Gawaarida (Warbixinta Gaarka ah)
Ogeysiiska Soo iibsiga: Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Injineerinka Subway Supercing…
Khadka tareenka ee Ümraniye Göztepe
Xariiqa Mitroo (Metro Line) oo Dhismeheedu socday 2 sano